लूका १० | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१० यी कुरापछि प्रभुले अरू सत्तरी जना चेला चुन्नुभयो र आफू जान लाग्नुभएको हरेक सहर अनि ठाउँमा दुई-दुई गरी पहिल्यै पठाउनुभयो। २ अनि उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्न थाल्नुभयो: “फसल त साँच्चै प्रशस्त छ तर खेतालाहरू भने थोरै छन्‌। त्यसकारण, फसलका मालिकलाई आफ्नो बाली काट्न खेतालाहरू पठाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गर। ३ त्यसैले जाओ। हेर, म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु र तिमीहरू ब्वाँसाहरूको बीचमा परेका पाठाहरू जस्तै हुनेछौ। ४ तिमीहरूले थैली नबोक, न खाजाको पोको, न चप्पल नै बोक अनि तिमीहरू बाटोमा कसैलाई अभिवादन गर्नलाई नरोकिओ। ५ जब तिमीहरू कुनै घरभित्र पस्छौ, तब पहिले यसो भन: ‘यो घरमा शान्ति छाओस्।’ ६ यदि शान्ति चाहने व्यक्ति* त्यहाँ रहेछ भने तिमीहरूले कामना गरेको शान्ति ऊमाथि रहनेछ। यदि रहेनछ भने त्यो शान्ति तिमीहरूकहाँ नै फर्किआउनेछ। ७ तब तिमीहरू त्यही घरमा बस, तिनीहरूले जे दिन्छन्‌, त्यही खाओ अनि पिओ, किनकि कामदार आफ्नो ज्याला पाउन योग्यको हुन्छ। तिमीहरू घर-घर चाहार्दै नहिंड। ८ “साथै, तिमीहरू जुन सहरभित्र पस्छौ, त्यहाँ तिमीहरूको स्वागत गरिन्छ भने तिनीहरूले जे दिन्छन्‌ त्यही खाओ, ९ त्यहाँका बिरामीहरूलाई निको पार अनि ‘परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको नजिकै आइपुगेको छ’ भनेर तिनीहरूलाई सुनाओ। १० तर तिमीहरू जुन सहरभित्र पस्छौ, त्यहाँ तिनीहरूले स्वागत गरेनन्‌ भने तिमीहरू त्यहाँको चौबाटोमा जाओ र भन: ११ ‘हाम्रो खुट्टामा टाँसिएको तिमीहरूको सहरको धूलोसमेत तिमीहरूविरुद्ध साक्षीको निम्ति पुछ्छौं। तैपनि, परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगिसकेको छ भनेर चाहिं तिमीहरूले नबिर्स।’ १२ म तिमीहरूलाई भन्छु, त्यस दिन सदोमले भन्दा त्यस सहरले चर्को दण्ड पाउनेछ। १३ “ए कोराजिन, तँलाई धिक्कार! ए बेथसेदा, तँलाई धिक्कार! किनकि तँकहाँ गरिएका शक्तिशाली कामहरू टायर र सीदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले भाङ्ग्रा लगाएर अनि खरानीमाथि बसेर धेरै अघि नै पश्‍चात्ताप गरिसकेका हुनेथिए। १४ त्यसैगरि, न्यायको दिनमा टायर र सीदोनले भन्दा तिमीहरूले चर्को दण्ड पाउनेछौ। १५ अनि ए कफर्नहुम, के तँचाहिं उचालिएर आकाशसम्मै पुग्नेछस्? तँ तल चिहानमा* खसालिनेछस्! १६ “जसले तिमीहरूको कुरा सुन्छ, त्यसले मेरो कुरा पनि सुन्छ। अनि जसले तिमीहरूलाई इन्कार गर्छ, त्यसले मलाई पनि इन्कार गर्छ। साथै, जसले मलाई इन्कार गर्छ, त्यसले मलाई पठाउनुहुनेलाई पनि इन्कार गर्छ।” १७ तब ती सत्तरी जना चेला रमाउँदै फर्के अनि उहाँलाई यसो भने: “प्रभु, हामीले तपाईंको नाम लिंदा दुष्ट स्वर्गदूतहरूसमेत हाम्रो वशमा आए।” १८ यो सुनेर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “बिजुली चम्केजस्तै सैतान आकाशबाट खसेको मैले देखें। १९ हेर, मैले तिमीहरूलाई सर्प अनि बिच्छीहरूलाई आफ्नो पैतालामुनि कुल्चने र शत्रुको सबै शक्तिमाथि विजयी हुने अख्तियार दिएको छु। कुनै पनि कुराले तिमीहरूलाई कुनै हालतमा चोट पुऱ्याउनेछैन। २० तैपनि, दुष्ट स्वर्गदूतहरू तिमीहरूको वशमा आए भनी नरमाओ, बरु तिमीहरूको नाम स्वर्गमा लेखियो भनेर रमाओ।” २१ त्यसै बेला उहाँ असाध्यै खुसी हुनुभयो र पवित्र शक्तिले भरिएर यसो भन्नुभयो: “हे बुबा, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, सबैको अगाडि म तपाईंको प्रशंसा गर्छु, किनकि तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवीहरूबाट होसियारीसाथ लुकाउनुभएको छ तर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। हो बुबा, यसै गर्न तपाईंलाई उचित लाग्यो। २२ मेरो बुबाले सबै कुरा मलाई सुम्पनुभएको छ अनि छोरा को हो, बुबाले बाहेक अरू कसैले जान्दैन अनि बुबा को हो, छोराले र छोराले प्रकट गर्न चाहेको व्यक्तिले बाहेक अरू कसैले जान्दैन।” २३ त्यसपछि चेलाहरू मात्र भएको बेला उहाँले तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: “धन्य हुन्‌ ती आँखा, जसले तिमीहरूले देखिरहेका कुराहरू देख्छन्‌। २४ म तिमीहरूलाई भन्छु, धेरै भविष्यवक्ता र राजाहरूले तिमीहरूले देखिरहेका कुराहरू हेर्ने इच्छा गरेका थिए तर हेर्न पाएनन्‌ अनि तिमीहरूले सुनिरहेका कुराहरू सुन्ने इच्छा गरेका थिए तर सुन्न पाएनन्‌।” २५ तब हेर, व्यवस्थामा पोख्त एक जना मानिस उठ्यो र उहाँको परीक्षा गर्न यसो भन्यो: “गुरुज्यू, के गरें भने म अनन्त जीवनको हकदार हुनेछु?” २६ उहाँले उसलाई सोध्नुभयो: “व्यवस्थामा के लेखिएको छ? तिमीले के पढेका छौ?” २७ उसले जवाफ दियो: “ ‘तिमीले यहोवा तिम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा मनले, आफ्नो सारा ज्यानले,* आफ्नो सारा बलले र आफ्नो सारा दिमागले प्रेम गर्नू’ अनि ‘आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।’ ” २८ उहाँले उसलाई भन्नुभयो: “तिमीले ठीक जवाफ दियौ। ‘त्यसै गरिरह अनि तिमीले जीवन पाउनेछौ।’ ” २९ तर आफूलाई परमेश्वरको नजरमा असल साबित गर्ने हेतुले त्यस मानिसले येशूलाई सोध्यो: “वास्तवमा मेरो छिमेकी को हो?” ३० तब येशूले यस्तो जवाफ दिनुभयो: “एक जना मानिस यरूशलेमबाट यरिहोतिर ओर्लंदै थियो। अनि डाँकुहरूले उसलाई हमला गरे र उसको लुगासमेत लुटेर कुट्नसम्म कुटे अनि उसलाई अधमरो छोडेर गए। ३१ संयोगवश एक जना पुजारी त्यही बाटो भएर ओर्लंदै थियो तर उसलाई देख्नेबित्तिकै ऊ बाटोको पारिपट्टीबाट गयो। ३२ त्यसैगरि, तल ओर्लिरहेको एक जना लेवी पनि त्यस ठाउँमा पुगेपछि उसलाई देख्नेबित्तिकै बाटोको पारिपट्टीबाट गयो। ३३ एक जना सामरी पनि त्यही बाटो भएर यात्रा गरिरहेको थियो। अनि त्यहाँ पुगेपछि उसलाई देख्नेबित्तिकै टिठायो। ३४ त्यसैले उसको नजिक गएर उसको घाउमा तेल र दाखमद्य लगाएर पट्टी बाँधिदियो। त्यसपछि, आफ्नो गधामा चढाएर पौवामा लग्यो र त्यहाँ उसको स्याहार-सुसार गऱ्यो। ३५ अनि भोलिपल्ट उसले दुई दिनार निकालेर पौवाको मालिकलाई दियो र भन्यो: ‘तिमीले उसको हेरविचार गर्नू र यसबाहेक जति खर्च लाग्छ फर्केर आउँदा म तिरूँला।’ ३६ अब भन, यी तीन जनामध्ये कोचाहिं डाँकुहरूको फेला पर्ने त्यस मानिसको छिमेकी ठहरियो?” ३७ उसले भन्यो: “जसले ऊसित कृपालु व्यवहार गऱ्यो त्यहीचाहिं।” तब येशूले उसलाई भन्नुभयो: “जाऊ, तिमी पनि त्यसै गर।” ३८ अनि उहाँहरू जाँदै गर्दा कुनै एउटा गाउँमा उहाँ पस्नुभयो। त्यहाँ मार्था नाम गरेकी एक जना स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा पाहुना बोलाइन्‌। ३९ तिनको मरियम नाम गरेकी बहिनी पनि थिइन्‌, जो प्रभुको पाउनेर बसेर उहाँको कुरा सुनिरहेकी थिइन्‌। ४० तर मार्था भने थुप्रै कुरा तयारी गर्नमा अल्झिएकी थिइन्‌। त्यसैले येशूको नजिक गएर तिनले उहाँलाई भनिन्‌: “प्रभु, मेरी बहिनीले सबै काम म एक्लैलाई छोडेको के तपाईंलाई वास्ता छैन? मलाई सघाउन उसलाई भनिदिनुहोस् न।” ४१ तब प्रभुले तिनलाई यस्तो जवाफ दिनुभयो: “ए मार्था, मार्था, तिमी धेरै कुराको ज्यादै चिन्ता गर्छ्यौ। ४२ हामीलाई धेरै कुरा चाहिंदैन, एउटा मात्रै भए पनि पुग्छ। मरियमले आफ्नो निम्ति असल भाग रोजेकी छे र त्यो ऊबाट खोसिनेछैन।”
^ लूका १०:६ * शाब्दिक, “शान्तिको छोरा।”
^ लूका १०:१५ * ग्रीकमा “हेडिज।” अतिरिक्त लेख ८ हेर्नुहोस्।
^ लूका १०:२७ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।